50 Huru Zvidimbu ZveZano Uchazvidemba Kusaterera Kwauri - Blog
50 Huru Zvidimbu ZveZano Uchazvidemba Kuti Hauteerere
Isu tese takapihwa rairo ratisina kumbozvinetsa kutora, asi dai dai taive naro.
Vamwe vanogona kunge vakatiudza kuti tiite (kana kusaita) chimwe chinhu, uye isu tazvisunga nekuda kwekusavateerera.
Heano makumi mashanu emakumi emazano akakodzera kuteerera. Zvinogona kunge zvisingave zvakakosha panguva ino chaiyo, asi zvingangoita zvese zvinouya zvichazotamba pane imwe nguva muhupenyu hwako.
1. Chengetedza hutano hwako. Zvese zvaunodya, zvese zvishoma zvekurovedza muviri zvaunoita zvinokanganisa hupenyu hwako hwese. Izvi zvinoenda izvozvi pamwe nemanzwiro aunoita makumi emakore kubva zvino. Ramba uchishingaira, idya zvakanaka, uye rako ramangwana pachako richakutenda nekuda kwekudyara.
2. Vimba nekutonga kwako. Kangani iwe pawakaisa parutivi yako pachako intuition pane imwe mamiriro nekuti mumwe munhu akaedza kukugombedzera neimwe nzira? Uye kangani iwe wakazvirovera iwe pachako nekuita kudaro? Vimba nekutonga kwako, uye ubatisise kwairi.
3. Dzidza kugadzikana nekusagadzikana. Iwe pasina mubvunzo uchasangana nemamiriro ezvinhu anoita kuti unzwe kusagadzikana. Dzidza kubvuma kuti iwe uri kunzwa 'kure,' Pasina chishuwo chakakomba chekuchinja mamiriro ako. Saizvozvo, dzidza kutaura kuti 'izvi zvinondiita kuti ndisagadzikane' usingabvunze kuti vamwe vasiye maitiro anoita kuti unzwe chimwe chinhu chausingade.
4. Gadzira nzira dzakasimba dzekutarisana nadzo. Izvi zvinoenderana nechikamu chekare chezano. Uchasangana nezvinhu zvakawanda muhupenyu izvo zvinogona kukukanganisa kana kukuvhundutsa. Nekusimudzira nzira dzakanaka dzekugadzirisa , iwe unozogona kuzvigadzirisa pasina kuputswa. Zviri kumusoro iwe kudzidza kudzora ako ega mafungiro uye manzwiro maererano nehupenyu hwakawandisa matambudziko.
5. Chinja mamiriro ezvinhu anochinja. Zvakanaka kuronga, asi isu hatigone kufunga kuti zvinhu zvichatamba sezvatakatarisira. Kuyerera nemamiriro ezvinhu ari kuchinja, ronga hurongwa hwezviitiko, kana kurongedza zvinhu pazvinenge zvichidikanwa.
6. Zvizive iwe pachako . Kunyanya kutsvaga mweya kwaunoita, iwe unowedzera kuziva iwe pachako. Uye kana uchinge wadaro, iyo pfungwa yekuzvida ichakubatsira kukuona iwe mumamiriro mazhinji akaoma.
7. Rega kunetseka pamusoro pezvingafungwa nevamwe. Pfeka zvaunoda, ida waunoda, ita zvinokufadza. Avo vane hanya newe vachakuda uye vanokugamuchira, uye avo vasina, mushe ... maonero avo haana basa.
Ona “kukundikana” kwese sechiitiko chekudzidza. Kukundikana zvachose kunoyamwa, kunyanya kana kutadza kwacho kuchinyadzisa. Izvo zvakati, tinogona kudzidza zvakawanda kubva pane zvatinoona sekutadza. Tora quote yaThomas Edison: “Handina kukundikana. Ini ndangowana zviuru gumi nzira zvisingashande. '
9. Ita sarudzo nemusoro wakajeka uye nedumbu rakazara. Sarudzo zhinji dzakashata dzakaitwa apo vanhu vakaremerwa nepfungwa. Kana hangry. Kana iwe uine sarudzo yakakosha yekutora, ita shuwa yekuzorora yakawanda, uye idya chimwe chinhu. Ipapo, uye chete ipapo, shanda kuburikidza nesarudzo yekutora.
10. Usatambisa nguva yako uchinetsana nemapenzi. 'Vachakuzvuzvurudzira pasi padanho ravo vobva vakurova neruzivo.' Funga nezve iyo nguva yese yawakatambisa kupinda mukukakavara mune zvemagariro midhiya. Ndiyo nguva yausingazombodzoka, uye hazvigone kuti iwe wakachinja chero munhu pfungwa nezve chero chinhu. Ingo usazvinetsa.
11. Ziva kuti haugone kufadza munhu wese. Kana iwe ukapedza yakawanda yenguva yako uchiedza kuita kuti vamwe vese vafare, unosuwa. Chero chiito iwe chaunotora chichafadza vamwe vanhu, chigumbura vamwe, uye zvinogumbura vashoma futi. Izvo zvakanaka.
12. Nzwisisa kutsamwa kwako, uye ushandise zvine pundutso. Ngatitii warambwa nebasa raunokwana, uye unotsamwa nazvo. Panzvimbo pekungochema nekuda kwekusarongeka uku, chinja iro simba kune chimwe chinhu chinonyanya kubatsira. Kunge kutanga rako bhizinesi, uye kuita basa riri nani pane iyo kambani yakarasikirwa nekukwira iwe.
13. Ramba uchifunga kuti hapana munhu ari pamusoro peumwe munhu. Mumwe anogona kunge aine mamaneja kana mamaneja ari munzvimbo dzepamusoro, asi izvo zvinongoreva kuti ivo vari munzvimbo yechiremera. Icho chinongova chinzvimbo - ivo havasi nani kupfuura chero ani zvake, uye hapana munhu ari pamusoro pavo. Saka nekudaro, haufanire kumbonzwa wakaderera kune chero munhu - vese vakaenzana, kunyangwe paine humbowo hwepamusoro hunogona kuratidza zvinopesana.
14. Rarama munguva iripo. Chii chinoitika kune mutyairi pavanenge vakatarisa kuseri kwekuseri, kana girovhosi bhokisi, kana kunze kwehwindo rerutivi, panzvimbo pekuchengeta maziso avo mumugwagwa? Right, saka, iwe unofunga kuti zvinobatsira here kuti maziso ako arambe akatarisa pane zvakapfuura nyaya kana zvekufungidzira zvenguva yemberi pane ino nguva, izvozvi? Zvekare kungori ndangariro, uye ramangwana kufungidzira. Zvese zvatiinazvo izvozvi izvozvi, saka gara pano.
15. Bvunza, usafungidzira. Nharo dzisingaverengeke uye nehondo dzakaitika nekuti vanhu vafungidzira zvinhu pane kuvabvunza. Vanhu vazhinji vanotevera iyo 'fungidzira -> kupomera -> kurwisa' nzira. Panzvimbo pekuzvinetsa nekuwana chokwadi chemamiriro ezvinhu nekubvunza nezvazvo, vanouya netsananguro mupfungwa dzavo, zvichibva pazviitiko zvavo kana kusarura. Ipapo ivo vanoratidzira fungidziro dzavo uye vanoburitsa gehena. Iko kunogara kune zvimwe zvakawedzera ruzivo kuti uwane, saka gara uchibvunza.
Iva nemhosho dzako, uye dzidza pazviri. Hapana munhu anoremekedza munhu anoedza kupomera vamwe zvikanganiso zvavo. Mukupesana, vanhu vanofunga zvakanyanya pamusoro pevaya vanobvuma kukanganisa kwavo, vozotora matanho ekuchinja chaiko.
17. Shandisa zviitiko zvakaoma semikana yekudzidza. Hupenyu hunogona kuve hwakaomarara zvisingaite pane dzimwe nguva, uye tese tinosangana nekurwadziwa pamoyo, kurasikirwa, uye mamwe marudzi ehurombo pane imwe nguva. Edza kudzidza kubva pane ese chiitiko kuti iwe ugone kukura kubva kwavari. Izvi zvinokubatsira iwe kunzvenga musungo wekuumburuka muhunhu.
18. Taura rutendo kazhinji. Hukama husingaverengeki hunoputsika nekuti vanhu vanonzwa kutorwa sevasina basa. Vanhu vazhinji vanokudziridza pfungwa yekodzero maererano nehunhu hwevamwe, kunyanya zviito zvevamwe vavo. Usambofa wakarega vamwe vachinzwa kuti wakavatora sevasina basa. Pane kudaro, ratidza kuonga kwako pazvinogoneka. Kunyangwe zvinhu zvidiki.
19. Ramba uchidzidza . Kudzidza nekudzidza hazvifanirwe kupera kana wapedza chikoro. Nekugara uchidzidza zvinhu zvitsva, iwe unogadzira matsva epfungwa nzira. Muchokwadi, tsvagiridzo inoratidza kuti kudzidza hunyanzvi hutsva, mitauro, uye kufamba semunhu mukuru inogona kubatsira kubvisa dementia . Uchifunga kuti pane zvakawanda zvekudzidza kunze uko, haufe wakambove nechikonzero chekufinhwa.
makumi maviri. Rega kugumbuka . Vanhu vazhinji vane mhinduro yemabvi-pakarepo yekugumburwa nezvavanodudzira kuti zviito zveumwe kana mazwi. Kazhinji, imhaka yekuti ivo havana kunzwisisa kana kusanzwisisa maitiro emumwe munhu uye vakazvitora sekuzvidza vega. Vamwe vanoshandisa kukanganisa kwavo senzira yekunyaradza avo vasingabvumirane navo. Iwe unogona kusawirirana nepfungwa yemumwe munhu pasina kuitora sekurwiswa pachako. Saizvozvowo, zvaunofunga kuti hunhu hunogumbura kwauri hunogona kunge husinei newe zvachose.
21. Chengeta shoko rako. Kana iwe uchida kuremekedzwa uye kuvimbwa, saka chengeta zvivimbiso zvako, kunyangwe (kunyanya) pazvinenge zvakaoma kuzviita. Kuvimbika kwako pachako kunoverengeka kupfuura zvaunogona kufungidzira, uye kuva nemukurumbira wekuvimbika kunobatsira zvikuru muhupenyu hwako hwese.
22. Hupenyu hwako, sarudzo dzako. Hapana mumwe munhu ane chero chirevo pane zvaunosarudza kuita (kana kusaita) maererano nesarudzo dzako dzehupenyu. Une kodzero yekusarudza rako wega basa, mudiwa, maitiro ekuchengetedza hutano, uye mararamiro. Hapana mumwe munhu ane chikwereti tsananguro yesarudzo dzako. Vanogona kusawirirana nesarudzo dzako, asi ndiyo nyaya yavo, kwete yako.
23.Pedza nguva yakawanda uchiteerera nekucherechedza pane kutaura. Unogona kudzidza zvakawanda nekuziva nekucherechedza zviri kuitika zvakakukomberedza. Kutaura nekuda kwayo pachako kunongotora nguva nemhepo, kugadzira (zvingangoita) ruzha rusina basa. Cherekedza uye ongorora, uye sarudza ako mazwi nokungwarira.
24. Taura zvakajeka, uine chivimbo. Izvi zvinoenda pamwe nekamwe kezano riri pamusoro. Vanhu vazhinji vakatora mazwi ezwi avakadzidza kubva kunhepfenyuro, kukuvadza kwavo. Iwe ucharemekedzwa zvakanyanya uye kutorwa zvakanyanya kana iwe uchitaura. Izvi zvinogona kukubatsira iwe mumamiriro ezvinhu kubva pakubvunzurudzwa kwebasa kusvika kumatare edzimhosva.
25. Tarisana nekutya kwako. Hapana munhu anofarira kusangana nematambudziko kana kurwadziwa. Izvo zvakati, kuvanda kubva kuzvinhu zvinoita kuti titye kana kunetseka hazviite kuti izvo zvinhu zvinyangarike. Uyezve, kutera mukutya uye kuzvidya mwoyo kunowanzoita kuti titye zvakanyanya mukufamba kwenguva. Nhau dzakanaka ndedzekuti maonero edu ekutyisa zvimwe zvinhu zvinowanzove zvakanyanya kupfuura zvaari chaizvo.
26. Usaite zvaunovenga. Vazhinji vedu takanzwa kunzwa kwekushushikana uye chigumbu zvinouya nekuita chimwe chinhu chatinozvidza zvachose. Kana iwe uchivenga basa rako, mikana iri kukonzeresa zvakanyanya zvakashata manzwiro mauri. Izvi zvinogona kutungamira kuhutano husina kunaka, pamwe nekuparara kwehukama. Hupenyu hupfupi kuti upedze nguva uchiita zvinhu zvinokurwadza.
27. Invest in anoshamisa metiresi. Iyi inogona kuratidzika kunge isinganzwisisike, asi kurara kwakanaka kwehusiku uye kutsigirwa kwakakodzera kwemuviri kunokanganisa zvisingaite pahutano hwako hwese. Rangarira kuti iwe unoshandisa chinenge chetatu chehupenyu hwako wakarara, saka chiite chiitiko chikuru.
28. Vhura kune mamwe maonero. Vanhu vazhinji vanobva vadzinga pfungwa dzevamwe uye zviitiko nekuda kwekuti havagone kuenderana nazvo. Dzidza kuteerera uye unzwe chaizvo zvinotaurwa nevamwe. Mikana ndeyekuti vanogona kupa nzwisiso iwe yaungadai usina kufunga nezvayo.
29. 'Zvinhu' hazvina kukosha . Ehe, isu tese tinoda kuve nezvinhu, asi pakupedzisira, hazvina basa chaizvo. Kana imba yako yanga ichitsva, iwe ungatsvangadzira kununura mumwe wako, vana, uye shamwari dzemhuka? Kana kurongedza mabhegi azere ne 'zvinhu'?
30. Unogona kugara uchibatsira mumwe. Zvisinei nezvauri kupfuura nazvo, ziva kuti pachagara paine mumwe anogona kubatsirwa nerubatsiro rwako. Kunyangwe kungodonhedza imwe mvura pane chirimwa chine nyota kuchaita mutsauko wakakura kuhwo hushoma hupenyu.
31. Usanyadzisa vamwe nesarudzo dzavo. Rangarira # 22? Izvi zvinoshanda kune wese munhu, uye hapana mumwe wedu ane mvumo yekunyadzisa vamwe nekuita sarudzo dzakasiyana dzehupenyu. Tinogona kusabvumirana nesarudzo uye maitiro avo, asi hazvireve kuti zvakanaka kuvasveeredza kana kuvapomera.
32. Zviitire iwe pekutanga. Izvi hazvireve kufuratira vamwe kana kuvabata zvakaipa. Zvinoreva kuti zvakakosha kuchengetedza nguva nenzvimbo yako wega. Ramba kukoka nenyasha kana iwe uchida imwe nguva wega. Dzidza kuti kwete, pane kubvuma uye wozova nehasha.
33. Kumbira ruregerero nemoyo wese. Kana uchiziva kuti watadza, kumbira ruregerero rwechokwadi. Hapana zvikonzero kana 'Ndine urombo iwe unonzwa nenzira iyo' zvinyorwa zvinyorwa. Hapana mumwe wedu akakwana, uye isu tese tinokanganisa dzimwe nguva. Chii chakakosha kuita kuti mumwe munhu azive kuti iwe unoziva kuti wakanganisa, uye une urombo.
34. Zvirinani kuve nechimwe chinhu uye usichichichida, pane icho chinopesana. Izvi ndezvechokwadi kune pantry rizere nezvinhu zvemumagaba uye zvekurapa sezvazviri kune chimbuzi kana chadzimisa moto. Ronga izvo zvinogona kutadza, kungoitika.
35. Usave d * ck. Icho chidiki chakanakisa chezano, asi chakakodzera icho. Zviito zvedu zvinowanzova nemhedzisiro yakasimba, uye kusaremekedza kana kusaremekedza vamwe vanozopedzisira vatendeuka vodzoka kwauri. Bata vamwe sezvaunoda kuitirwa.
36. Zvirinani kutora matanho pane kurarama nekuzvidemba. Vakwegura vasingaverengeki vanodemba kuti havana kutaura kana kuita zvimwe zvinhu pavakawana mukana. Izvi zvinonyanya kuitika maererano nekufamba, uye kuratidza manzwiro avaiita nezveavo vavaida.
37. Tarisa zvakanyanya kune hunhu hwevanhu kupfuura mazwi avo. Tenda zvakachinja zviito uye maitiro, kwete mazwi chete. Munhu uyu anochengeta zvaakavimbisa here? Kana vakakumbira ruregerero uye vakavimbisa kuita zvirinani, ivo vanotevedzera nezviito here?
38. Mabatiro aunoitwa nevanhu anoratidza manzwiro avanozviita. Kutsoropodzwa kubva kune vamwe kunoratidza manzwiro avanoita pamusoro pavo. Iwe unongosimudza girazi kune avo pachavo vanoona kusakwana
39. Kuita kwakarurama kunoita kukwana. Ita shuwa kuti zvinhu zvauri kudzidzira zviri muchokwadi nzira chaiyo. Wobva waidzidzira nekushinga kusvikira iwe wasvika padanho rehunyanzvi rinoita kuti unzwe wagona.
40. Kana iwe uchinetseka neako maitiro, chinja. Maitiro anogona kubatsira, asi anogona zvakare kudzikisira mweya wemunhu. Chinja karenda rako revhiki nevhiki, ita zvinhu mumazuva akasiyana, panguva dzakasiyana. Ona izvo zvinonyanya kushanda.
41. Zviito zvako nhasi zvinoraira hupenyu hwako hwese. Ucharangwa here, kana kuti uchanonoka? Uri kusarudza mutsa nekuzvigadzirisa, kana kuvengana nevamwe? Sarudzo yega yega inovhura imwe nzira yekuti iwe ufambe.
42. Ita tsvagiridzo yako usati wagadzirisazve vhiri. Iwe unogona kunge uine mamwe mazano akanaka, asi vamwe vangave vaine zvirinani zvirinani. Tsvagurudza zvese zvakanyatsonaka, wobva wasarudza kuti sei, kana kana, iwe uchigona kuvandudza pane zvawakawana.
43. Iva nechokwadi mukusava nechokwadi kwako. Ziva kuti izvo zvaunoziva sechokwadi chizere izvozvi zvinogona kuchinja kana iwe ukadzidza chimwe chakasiyana.
44. Usarega hunhu hunomanikidza huchikutyisidzira iwe. Vazhinji vanoedza kudheerera vamwe nekuwedzera uye nehasha. Saizvozvo, chihuahuas dzinohukura misoro yadzo kure, uku mhumhi dzakanyarara. Bata ivhu rako kana mumwe munhu achibata, kunyanya kana chinzvimbo chako chakasimba.
45. Rangarira kuti iwe ndizvo zvaunodya. Izvi zvinoenda kune zvekudya nekumwa pamwe nevezvenhau uye varaidzo. Bata muviri wako nepfungwa semwana wako anokosheswa, anoera, uye uvape zvinoenderana.
46. ​​Nguva dzose teerera kune zvakakukomberedza. Ziva zviri kuitika zvakakukomberedza. Kana mamiriro ari kukuita usina kugadzikana, saka teerera kune zviri kukonzera iko kuita. Zviri kuitika nekuda kwechikonzero. Kuziva kuchakubvumidza iwe kupindura kana kuita kune chero chinoitika.
47. Sarudza vadikani vako zvakanyatsonaka. Isu tinochinjana yakawanda manzwiro uye simba needu epamoyo shamwari. Iva nerusarura nesarudzo dzako dzepedyo uye unenge uine kuzvidemba kushoma.
48. Tora nguva usati wavimba. Zvakanaka kuva nehanya uye kuva nehanya nevanhu, asi sarudza waunovimba naye. Vanhu vanoratidzira kwavo kwechokwadi nekufamba kwenguva, uye iwe ungademba kuve wakasununguka kwazvo kune vasiri ivo.
muhukama, kuzvipira kunoreva izvozvo
49. Iva nemutsa, pazvinogoneka. Hupenyu hwese huchava nemarwadzo uye kuomerwa, saka edza kusave sosi yeayo. Hapana chiito chemutsa chakambotambiswa, uye nyasha uye hunyoro iwe zvaunoratidza chimwe chipenyu chingachinje hupenyu hwavo hwese.
50. Rarama zuva rega rega sekunge kwaive kwako kwekupedzisira. Vazhinji vanopambadza mazuva avo nekuti vanofunga kuti vane nguva yekuwedzera. Chero ani wedu aigona kuve nemakore makumi maviri akasara, kana isu tingave takaenda mumaminetsi makumi maviri. Sarudza zvine hungwaru kana zvasvika pakushandisa nguva yako, uye naani.
Unoda here zano nezve nharaunda yehupenyu hwako kunyanya? Taura nemudzidzisi wehupenyu nhasi anogona kukufambisa chero zvazvave. Simply tinya pano kuti ubatanidze neimwe.
Mitemo 9 Yekurarama NeKwe Hupenyu Husingazodembi KweChipiri
21 Nzira Huru dzekuvandudza Hupenyu Hwako
Nzira 30 dzekuwana Hupenyu Hwako Pamwechete Uye Zvese Zvese
Izvo Zvinhu Gumi Zvakanyanya Kukosha Muhupenyu
21 Zvinhu izvo Munhu wese Anofanirwa Kuziva Nezve Hupenyu
7 Zvinokosha Muhupenyu Zvinofanirwa Kugara Zvichiuya Pakutanga
sei vakomana vachidzoka mushure memwedzi
matipi ekurarama mune ino nguva
ndaneta nekutorwa kunge pasina
maitiro ekuremekedza kuramba zuva uchishandisa zvinyorwa
mushure memazuva mashanu kwakanyanya here
dzimwe nguva ndinonzwa sekuti handina shamwari